WHO oo ka digaysa dawo been abuur ah oo ku jirta suuqyada Kenya (Iska jir dawada lambarkan leh) | Hadalsame Media
Home Caafimaadka WHO oo ka digaysa dawo been abuur ah oo ku jirta suuqyada...
WHO oo ka digaysa dawo been abuur ah oo ku jirta suuqyada Kenya (Iska jir dawada lambarkan leh)
(Nairobi) 29 Agoosto 2019 – Hey’adda Caafimaadka Adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa soo saartay digniin caafimaad oo ay u jeedisay dadka ku nool Kenya.
Heyadu waxa ay sheegtay in daawada qallajiyaha ama Antibiotics lagu magacaabo Augmentin oo ah qeyb ka mid ah Amoxicillin trihydrate taas oo laga isticmaalo Kenya ay tahay been abuur keeni karta halis weyn oo dhanka caafimaadka ah.
WHO waxay tilmaantay dawada wadata tirsiga 786627 dadku iska ilaaliyaan.
Qofkii isticmaala dawadan been abuurka ah ee la kulma xaalad aan caadi ahayn ayaa laga codsanayaa inuu dhaqse ula xiriiro goobaha caafimaad ee ugu dhow.
Previous articleWARBIXIN: ”Dhagaxii aad faydaba waa ku jiraan!” – Maraykanka & Imaaraadka oo isku haya arrimo ay Somalia ku jirto (CIA oo aan Imaaraadka basaasin!)
Next articleDHEGEYSO: Sweden oo keentay hindise cusub oo ay Soomaali badani ka faa’iidaysan karaan